Saif Ali Khan booliska miyuu u dacwoonayaa madaama wiilkiisa Taimur sawir qaadayaasha wareeriyeen! – Filimside.net
Saif Ali Khan booliska miyuu u dacwoonayaa madaama wiilkiisa Taimur sawir qaadayaasha wareeriyeen!
Lamaanaha caanka ah Saif Ali Khan iyo xaaskiisa Kareena Kapoor Khan waxaana marwalbo hadal heynta kala wareego wiilkooda Taimur Ali Khan kaasi oo saxaafada daba dhigatay meel walbo uu joogo waxayna kasoo bandhigaan sawiro iyo muuqaalo Video aysan qoyskiisa raali ka ahayn.
Waa qasab in maalin walbo Internet lasoo dhigo aqbaar ama sawir ku saabsan Taimur waxaana aad u dhibsatay arinkaan hooyadiis Kareena Kapoor Khan oo sheegtay in wiilkeeda uusan heli karin nolosha caruurta isaga la mid ah madaama uu weli yar yahay asigoo dhashay dhamaadkii 2016 sidoo kalena waxay Bebo dal batay ilaalo gaar ah in Taimur loo sameeyo ama saxaafada ka leexato wiilkeeda si uu koriimo dabiici ah u helo asaagiisa ula cayaaro.
Saif Ali Khan ayaa beeniyay wararka sheegayo in booliska dacwad u gudbiyeen wuxuuna sheegay in wiilkiisa Taimur saxaafada ku waalan tahay haddana uusan waxba ka qaban karin mararka qaarna ay dhacdo subaxdii aroortii hore 500 am in banaanka gurigooda sawir qaade joogo iskaba dhaaf waqtiyada kale oo ay aad u badan yihiin sawir qaadayaasha banaanka guriga Saif joogaan.
Saif Ali Khan wuxuu yiri “Wax dacwad ah booliska uma gudbinin aniga iyo Kareena waxaan isla qaadanay dhankeena inaan ka dadaalno sidoo kalena dulqaad badan muujino waxaa intaas dheer sawir qaadihii wiilkeeda ku xad gubdo waxaan isku dayeynaa ilaa xad inaan qaladkiisa u sharaxno haatana waan ku guuleesanay in dhowr sawir qaade aan la hadalnay si wiilkeena nolol caadi ah ugu noolaado weyna naga aqbaleen.”
Sidoo kale Saif Ali Khan wuxuu sheegay in daris wanaagsan leeyihiin xitaa ay dhacdo mararka qaar wiilkooda marka uu banaanka ku cayaarayo haddii sawir qaade goobta imaado ka celiyaan inuusan sawir ka qaadin loona ogolaado caruurta asaagiisa inuu waqti la qaato dhib la’aan.
Waxaa Aqrisay 290